Sida loo Guba HD Video inay DVD on Mac / Win (Windows 8 ka mid ah)
> Resource > Video > Sida loo Beddelaan iyo Guba HD Video inay DVD (Windows 10 ka mid ah)
HD video ayaa noqonaya sano iyo aad u badan oo caan ah, kuwaas oo tan iyo markii ay leedahay video tayo ka wanaagsan oo saameyn muuqaal ah. Qaar badan oo videos qaaday kaamirada iyo soo bixi Internet waa qaab HD. Haddii aad qabto wax badan videos HD oo doonaya in ay gubi HD videos in DVD in uu kaydiyo iyo gurmad videos HD ama ay doonayaan inay card video Salaan ama DVD hadiyad ka videos HD aad qaaday, ka dibna aad u yimaadeen inay meel sax ah . Maqaalkani waxa uu ku keenaa xal loo helo iyo in si dhakhso ah sida loo gubi HD video inay DVD (Windows 10 ka mid ah).
Wondershare DVD Creator waa video HD ah in DVD gubi taas oo keliya ma aha kuu ogolaanaya in aad si aad u eegto HD videos on ciyaaryahan caadi DVD guriga, laakiin sidoo kale aad u saamaxaaya ilaa iyo dib badbaadin HD videos aad. Sidaa daraadeed, aad u bedeli karaan HD videos qaabab video kala duwan, sida AVI, MP4, MKV, TRP, MTS, M2TS, AVCHD, iwm DVD ku qasabno yar. Intaas waxaa sii dheer, video HD si aad DVD Converter kuu ogolaanaya in aad xaalkaa videos iyo codsan DVD bedeley shakhsiga.
Free download HD video inay DVD gubi:
Fiiro gaar ah: Haddii aad tahay user Mac ah, waxaad isticmaali kartaa DVD Creator for Mac . Hel DVD Creator version xaq aad oo raac talaabooyinka si loogu badalo HD si DVD. (Fiiro gaar ah: Tallaabooyinka qaadataa Screenshot Windows tusaale ahaan si ay u gubaan HD ee Mac, waxay ku dhow waa isku mid..)
Sida loo badalo oo gubi HD video inay DVD talaabo talaabo ah
Marka aad soo bixi DVD Creator, raac saaxir ah set-up si ay u rakibi. Dhanka kale, geliso -R ah recordable DVD (DVD + R, DVD + RW, DVD-RW, iwm) galay DVD gubi drive oo u diyaar in la sameeyo video HD si DVD.
Tallaabada 1. Import HD videos barnaamijka
Guji "Import" xitaa dooro videos HD aad jeceshahay si ay u gubaan ah. Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ee videos daray waxaa laga heli karaa suuqa kala xaq u arkaysid ah.
Tallaabada 2. Edit HD videos la dhisay-in editor video
Dooro video clip ah oo riix badhanka edit in la furo suuqa kala video edit ah. Sida aad arki karto, waxaa laguu ogolyahay in aad astaysto videos by beerista, qoqobada, falinjeeerka, isagoo intaa ku daray saamaynta, isagoo intaa ku daray watermarks iyo wixii la mid ah.
Tallaabada 3. Dooro DVD menu ah
Sida uu "Menu" tab, aad qorayaasha karaa menu DVD aad DVD HD video ah. Waxaad dooran kartaa mid ka mid ah template DVD menu free dhisay-in oo Customize ka thumbnails DVD menu, sawirada asalka, badhamada, iwm
Tallaabada 4. Kulanka Xiisaha iyo gubi videos HD si DVD
Guudmar aad shaqada ka hor inta aanay ka ololayo. Marka dhan waa OK, u tag "Guba", doortaan qaab wax soo saarka iyo koobin ka dibna aad riix karaa "Guba" badhanka si ay u bilaabaan HD video inay DVD diinta.
Aqoon Wadaag: kooban oo ka mid ah HD videos (TS, MTS, M2TS, TP)
Bartay sida loo gubi HD videos in DVD disc, aynu eegno deg deg ah ee ugu caansan qaabab HD video:
TS: Waa nooc ka mid ah qaab weel digital in islamarkaana durdurrada hoose packetized iyo macluumaad kale. TS waxaa loo cayimay in MPEG-2 Qaybta 1aad, Systems (ISO / IEC heerka 13818-1). Durduri Gaadiidka bixiyaa qaababka qaladka la saxo gaadiid badan warbaahinta aan lagu kalsoonaan karin, waxaana loo isticmaalaa in codsiyada warbaahinta sida DVB iyo ATSC. Baro sida loo gubi TS in DVD .
TP: file TP loo abuuray by Beyond TV software duubo video digital loo isticmaalo si ay u qoraan video. File waa la duubayaa isticmaalaya kaarka tuner TV socon iyo il television ah sida analog ah ama digital cable, satellite, ama anteeno. Xogta qabashada files TP ka durduri gaadiidka ah (TS), taas oo ah hab maamuuska isgaarsiinta u audio, video, iyo xogta. Baro sida loo gubi TP in DVD .
MTS / M2TS: Nooca file MTS / M2TS ugu horayn la xiriira AVCHD. AVCHD waa-qeexidda sare qaab video digital taageera 1080i iyo 720p la size file macquul ah mid yar. Files AVCHD ku salaysan yihiin codec MPEG4 ah. Ka hadalka ku saabsan AVCHD, MTS iyo M2TS waa isku mid. Waa .MTS on fiidiyo iyo .M2TS keeno si ay PC. Baro sida loo gubi MTS / M2TS in DVD .
Tan iyo qaabab file video kor ku xusan ma taageersana by badan ciyaartoyda warbaahinta. Si ay iyaga ama kuwo kale file video HD sida HD MOV iyo HD MKV on PC ciyaaro, a VLC ciyaaryahanka lagu talinayaa in la isticmaalo. Ka sokow, waxaad kala soo bixi kartaa oo rakibi baakad kale codec sida DirectShow FilterPack 3.2 kaas oo awood kuu inuu u ciyaaro videos il gaadiidka HD si fudud.